Funda: Sishayele iSuzuki Swift, nakhu odinga ukukwazi ngayo
FANELESIBONGE BENGU | January 18, 2019
NJENGOBA unyaka usanda kuqala nje, baningi abanezifiso abazibekele zona abafuna ukuzifeza ku-2019.
Ezinye zezifiso wukuthenga imoto, kwabanye kungaba yimoto yokuqala kwabanye ukushintsha leyo abavele behamba ngayo. Yindaba eyaziwayo ukuthi isimo somnotho siyantengantenga ngakho kungenzeka ukuthi labo abafuna ukushintsha, yingoba bafuna ukuthatha encane eyongayo.
Nanoma ngabe uyimuphi kulaba bantu engikhuluma ngabo ngenhla, enye yezimoto ongayibheka yiyo iSuzuki Swift. Ngemuva kokuchitha nayo izinsuku ngingasho ngithi iyimoto ekahle, ikakhulukazi ukuhamba ngayo edolobheni njengoba iwumncanyana nje.
Bheka ngoba ubude bayo babehlise ngo-10 mm uma uyiqhathanisa nendala yesizukulwane sesithathu kodwa ububanzi bude ngo-40 mm. Okuhle kodwa wukuthi iwheelbase bayelule ngo-20 mm okuyenza ifinyelele ku-2 450 mm.
Lokhu kwenza isikhala ngaphakathi sivuleke abagibeli bahlale ngokukhululeka amadolo angathothathu. Uma ngishayela isihlalo ngisihlehlisa sonke, kwezinye izimoto ezincane kugcine kungangeneki kwesingemuva kodwa kule, siyasala isikhala nami ngihlale kahle.
Ngoba sengivele ngikhuluma ngokuvuleka kwayo ngaphakathi, angisale sengikutshela ukuthi ibhuthi yona ubukhulu bayo bungu-268 litres. Lesi sikhala sinyuswe ngo-58 litres uma uyiqhathanisa nendala futhi lesi sikhala siyanda uma ulalise izihlalo zangemuva. Engikuthandayo wukuthi ibhuthi wungathi liwumgodi, izimpahla zingena zishone phansi okwenza ukwazi ukulayisha zibe ningi. Mhlawumbe ukwanda kwebhuthi kwenziwa yikho ukuthi isondo eliyisipele lincanyana.
Ngaphambili icentre console ibheke ngakumshayeli. Isiteringi, esinamabhathini okulawula umsakazo kanjalo nokukhuluma ngeselula uma uyixhume ngeBluetooth, simise okukaD. Phezu kwesiteriningi kune-information display lapho ubona khona ukuthi ingahamba ibanga elingakanani ngophethroli onawo nokuthi idlala amalitha amangakanani ngo-100km.
Umsakazo udlala iCD ne-USB futhi kukhona nembobo ka-AUX. Ngezansi komsakazo kunezinkinobho zokulawula i-aircon. Engikuqaphelile wukuthi uma uthinta kudashboard nasezicabheni kuzwakala ngathi wuplastiki kodwa oqinile mbijana.
Ngezansi kwalapho kunezindawo zokubeka iziphuzo futhi lezi zikhala zikhona nasezicabheni.
Okunye enakho kuhlanganisa amawindi kagesi neremote central locking.
Uma uyifaka emgwaqeni ihamba kahle kodwa iyezwela emgwaqeni ethanda ukuba mibi. Bayifake iMacPherson suspension ngaphambili. Okunye okuhle ngayo wukuthi ayinawo umsindo otheni ngaphakathi niyakwazi ukuxoxa nabantu ohamba nabo ngaphandle kokunyusa izwi.
Ngaphansi kwebhonethi inenjini iK12M eyi-fourcylinder. Ikhiqiza amandla angu-61 kW ne-torque engu-112 Nm. Ngebanga lika-100km bathi isebenzisa amalitha angu-4.9 kanti futhi inethangi elingu-37 litres.
Ngesikhathi sihamba ngayo edolobheni nasemgwaqeni ovulekile, ibilokhu idla amalitha angu-5.5 kaphethroli nokuyinto encomekayo njengoba ibiyonga.
Ugearbox ushintsha onamagiya ayisihlanu kahle kwazise neclutch ithambile futhi uma ususemgwaqeni iyezwakala ukuthi iwumncanyana onenjini encane. Uma uzihambela ngo-120km/h amarevvs asuke engaphezulu kancane kuka-3000 kanti ukuze udlule enye imoto ngokuzethemba, kuhle ukwehlisa igiya.
Kwezokuphepha ifika nama-airbags omshayeli nomgibeli ngaphambili, ABS brakes ne-Electronic brake-force distribution nendawo yokufaka isihlalo sengane.
Ukuqokwa kwayo njengenye yezimoto ezingase zidle umhlanganiso emncintiswaneni iSouth African Car of the Year kukuveza ngokusobala ukuthi iyimoto esezingeni.
ISwift iyimoto ekahle mhlawumbe ukugqama kwayo kangako kubuye kuncishiswe wumbango ebhekene nawo ngokwabathengi njengoba incintisana neFord Figo, Toyota Etios, Polo Vivo nezinye.
1.2i GL MT R177,900
Inani lihlanganisa i warranty yeminyaka emihlanu noma * -200 000km ne service plan yeminyaka emibili noma * -30 000km.